विचार / ब्लग – Shalom Nepal
Posted on October 29, 2020 October 29, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(1)
शालोम नेपाल – अहिले को यो २१ औ शताब्दीमा ट्याटूहरू संसारका धेरै भागहरूमा पहिलेभन्दा बढी लोकप्रिय छन्। ट्याटू भएका व्यक्तिहरूको संख्या हालका वर्षहरूमा नाटकीय रूपमा बढेको छ। ट्याटू केवल बिरामी वा विद्रोहीहरूको लागि मात्र होईन। ऐतिहासिक रूपमा ट्याटूसँग सम्बन्धित विद्रोहको धार दिनानु दिन बृदीहुन थालेकोछ । नयाँ नियमले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले ट्याटू खोप्न […]
Posted on July 17, 2020 August 6, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
धर्मशास्त्रले महिला पास्टरको बिषयमा के भन्छ?
शालोम नेपाल – चर्चमा आज महिलाहरूले पास्टरको भूमिका निर्वाह गर्नु हुन्छ कि हुदैन भन्ने बिषयमा चर्को विवाद हुदै गइरहेको छ। नतिजाको रूपमा, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि यो मुद्दालाई पुरुष र महिलाको रूपमा हेर्नु हुँदैन। त्यहाँ महिलाहरू छन् जसले विश्वास गर्छन् कि महिलाहरूले पास्टरको रूपमा सेवा गर्नु हुँदैन र बाइबलले महिला पास्टरको सेवाकार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको […]
Posted on July 8, 2020 July 10, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
Posted on June 26, 2020 June 26, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
Posted on June 19, 2020 June 19, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
हरेक इसाई ले जान्ने पर्ने, पुरानो करारमा समाबेश भएको परमप्रभु परमेश्वोरको बिभिन्न नामहरू र तिनीहरूको अर्थ !
शालोम नेपाल – परमप्रभु परमेश्वोरको नामहरूले उहाँको धेरैपक्षीय चरित्रको फरक पक्ष वर्णन गर्दछ। यहाँ बाइबलमा परमेश्वरका केहि राम्रा नामहरु छन्: १) ईएल-एलोह [EL-ELOAH]: “परमेश्वर शक्तिशाली, प्रख्यात” (नहेम्याह ९:१७; भजनसंग्रह १३९:१९) – व्युत्पत्तिक रूपमा एलको अर्थ “सामर्थ्य” र “शक्तिशाली” देखिन्छ (उत्पत्ति ३१:२९)। एल अन्य गुणहरूसँग सम्बन्धित छ, जस्तै अखण्डता (गन्ती २३:१९), डाहि (व्यवस्था ५:९), र अनुकम्पा […]
Posted on June 16, 2020 June 17, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
कस्ता मानिसहरूले परमेश्वोरको आशिष्‌हरू प्राप्त गर्दछ ?
शालोम नेपाल – सबै जना परमेश्वरबाट आशिष्‌ पाउन चाहान्छन्। त्यसोभए, परमेश्वरबाट पाईने साँचो आशिष्‌हरू के-के हुन्? कस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वोरले आशिष्‌ दिनुहुन्छ? हामी कसरी परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न सक्छौं? परमेश्वोरबाटको आशिष्‌को बारेमा ३ शीर्षकहरूमा तपाईंलाई उहाँको आशीर्वादहरू प्राप्त गर्ने तरिका पत्ता लगाउन मार्गदर्शन गर्नेछ। परमेश्वोरका आशिषहरु के हुन्?धेरै व्यक्तिहरूको विश्वास छ कि ईश्वरीय आशिष्हरू प्राप्त गर्नुको […]
Posted on June 13, 2020 June 13, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)